Archive du 10/05/2012
Natsipin-dRajoelina amin�ny governemanta ny baolina
Mitranga mihemotra ny fitondram-panjakana hatrany amin�ny faratampony manoloana ny fitakian�ny sendikan�ny mpampianatra mpanabe na SEMPAMA.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Ambohijatovo aloha no resaka
Eo am-piandrasana ny fanambarana hataon�ny ankolafy Ravalomanana mikasika ny hiverenany hanohy na hialany tanteraka amin�ny fiaraha-mitantana ny tetezamita araka ny tondrozotra dia manamasaka ny fikasana hiverina eo Ambohijatovo, hanao tatitra amin�ny vahoakan�Antananarivo ireo Parlemantera avy amin�ny ankolafy Ravalomanana.
Fifidianana no vahaolana amin�ny krizy
Ny anay ato amin�ny Antoko Miombon�Ezaka, ny vahaolana dia ny fifidianana ihany, hoy ny filoha nasionaliny, Ravalisaona Zafisolo Cl�ment.
Andrasana fatratra ny tatitry ny Praiminisitra
Anio hariva no fotoana handanian�ny eny anivon�ny Filankevitra Ambonin�ny tetezamita an�ilay volavolan-dal�na 005/2012 mifandraika amin�ny resaka fifanarahan�ny Asecna efa lany teny anivon�ny CT farany teo.
Hanao hetsika goavana ny 13 mey
Nampandeferina ny fahasamihafana fa nampitoviana ny fomba fijery manoloana ny raharaham-pirenena.
Ireo izay mandinika tsara ny fanapahan-kevitra na ny fanambarana ataon�ny fitondrana tetezamita dia mahatsikaraitra fa maro be ny zavatra tsy manaraka ny l�jika mihitsy ary indraindray aza misy fanapahan-kevitra roa mifanohitra raisin�ny fitondram-panjakana.
Raharahan�ny ministera rehetra, hoy Rajoelison Rado
Amin�izao fotoana izao dia efa misy eny anivon�ny ministera tsirairay avy voakasik�ity olan�ny fitaterana ity na mivantana na tsy mivantana, hoy Rajoelison Rado, Tale Jeneralin�ny fitaterana an-tanety eo anivon�ny ministeran�ny fitaterana sy famantarana ny toetr�andro.
Olona leon�ny krizy
Hitohy anio eny Antanimena ny hetsika
Hitohy anio alakamisy misandratrandro ilay hetsika tontosain�ireo Olon-tsotra leon�ny krizy lavareny lalovan�ny firenena ankehitriny.
Ho hita eo ary !
Ny 4 mey lasa teo dia nisy ny taratasy avy any amin�ny praiminisitra nalefa any amin�ny minisitry ny fitsarana, milaza io taratasy io fa tokony hatsahatra daholo ny raharaham-pitsarana mahakasika ireo olon�ny mpanohitra.